Kamuun lagu qabsaday caruur ay kaniisad geeyeen | Somaliska
Hay'ada baaritaanka ku samaysa iskuulada (Skolinspektionen) ayaa eedeyn u soo [caption id="attachment_936" align="alignright" width="300" caption="Magaalada Borås ee gobalka Västra Götaland"] [/caption] jeedisay kamuunka Borås ka dib markii ay ardada iskuulka Gånghester ay geeyeen ganiisad xafladii xiritaanka iskuulka ee bartamaha sanadkaan. Kamuunka ayaa lagu haystaa in ay jabiyeen sharci mamnuucaya in ardada iskuulada loo sameeyo adeeg diin gaar ah. "Waa muhiim in iskuuladu ay ka dhigaan xaflada xiritaanka mid dhamaan ardada, waalidiinta iyo shaqaalaha ay ka soo qayb gali karaan. Waxaa muhiim ah in waalidiintu ay aaminaan markii ay iskuul ilmahooda u diraan in aan loo dhigi doonin mowduuc diin gaar ah" ayay tiri Anna-Lena Olsson oo ah qareenka baaraya arintaan. Balse kamuunka Borås ayaa ku dooday in arintaan lagala tashaday ardada iyo waalidiinta. Sharciga Sweden ayaa dhigaya xoriyada in uu qofku diinta uu rabo ka mid noqon karo ama xitaa diin la ahaan uu ahaan karo. Ayadoo sharciga iskuuladu uu dhigayo in adeega diimaha ee iskuulada uu banaanka ka ahaado in koox diimeed oo gaar ah laga saaro ama koox loo gaar yeelo. Sidoo kale Sweden ayaa laga ogolyahay in iskuulo diimeed oo madax banaan la furan karo balse waxaa ayagana qasab ku ah in nidaamka waxbarida ay ku saleeyaan sharciga Sweden . Maamulaha iskuulka Gånghester ee la eedeeyay ayaa xaqiijiyay in tookadaan ay ku qaban doonaan xaflada xiritaanka iskuulka hoolka ciyaaraha ee iskuulka.
Kamuun lagu qabsaday caruur ay kaniisad geeyeen
Hay’ada baaritaanka ku samaysa iskuulada (Skolinspektionen) ayaa eedeyn u soo
Magaalada Borås ee gobalka Västra Götaland
jeedisay kamuunka Borås ka dib markii ay ardada iskuulka Gånghester ay geeyeen ganiisad xafladii xiritaanka iskuulka ee bartamaha sanadkaan.
Kamuunka ayaa lagu haystaa in ay jabiyeen sharci mamnuucaya in ardada iskuulada loo sameeyo adeeg diin gaar ah.
“Waa muhiim in iskuuladu ay ka dhigaan xaflada xiritaanka mid dhamaan ardada, waalidiinta iyo shaqaalaha ay ka soo qayb gali karaan. Waxaa muhiim ah in waalidiintu ay aaminaan markii ay iskuul ilmahooda u diraan in aan loo dhigi doonin mowduuc diin gaar ah” ayay tiri Anna-Lena Olsson oo ah qareenka baaraya arintaan.
Balse kamuunka Borås ayaa ku dooday in arintaan lagala tashaday ardada iyo waalidiinta.
Sharciga Sweden ayaa dhigaya xoriyada in uu qofku diinta uu rabo ka mid noqon karo ama xitaa diin la ahaan uu ahaan karo. Ayadoo sharciga iskuuladu uu dhigayo in adeega diimaha ee iskuulada uu banaanka ka ahaado in koox diimeed oo gaar ah laga saaro ama koox loo gaar yeelo.
Sidoo kale Sweden ayaa laga ogolyahay in iskuulo diimeed oo madax banaan la furan karo balse waxaa ayagana qasab ku ah in nidaamka waxbarida ay ku saleeyaan sharciga Sweden .
Maamulaha iskuulka Gånghester ee la eedeeyay ayaa xaqiijiyay in tookadaan ay ku qaban doonaan xaflada xiritaanka iskuulka hoolka ciyaaraha ee iskuulka.
Haweenay lagu eedeeyay in ay la seexatay wiil da’a yar wadanka ku jooga
Dhibaatada Muslimiinta ka haysata dabaasha
Soo galootiga iyo shaqo la’aanta